Madaxwayne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo Xamar looga yeeray. | Ximan iyo Xeeb
Home CADAADO Madaxwayne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo Xamar looga yeeray.
Posted By: adminon: April 10, 2017 In: CADAADONo Comments
Dhawaan ayay ahayd markii maamulka Galmudug iyo dowladda Federal Somalia ay ku heshiiyeen in dib loo dhigo xiliga doorashada madaxwaynaha Galmudug si shir dib u heshiisiin ah loogu qabto Galmudug iyo Ahlusunna. Shirkaas oo ka dhacaya magaalada Muqdishu ayaa waxaa maamulka Galmudug uga qayb galaya madaxwayne ku xigeenka iyo gudoopmiayaha baarlamaanka.
Kooxda Ahlusunna iyo dawladda federalka ayaa horay uga wada hadlay mowqifka kooxda ahlusuna ee ku aaddan qaabkii ay uga mid noqn lahaayeen maamulka Galmudug.
Warar aan helayno ayaa waxay sheegayaan in mkooxda ahlusunna doonayso in la helo arimaha soo socda inta aanay ka mid noqon maamulka Galmudug.
1. In la badalo magaca Galmudug lana wada samaysto magac 2da maamul ku midaysan yihiin. Micnaha waa in wax kasta hoos laga soo bilaabo.
2. in xubnaha baarlamaanka iyo madaxdaba loo qaybsado si isla eg. Micnaha maamulkii hore ee Galmudug waa lagu kala tagayaa waxaana wax walba laga soo bilaabayaa bilow ama 0.
3. In doorashadu ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb isla markaasna si buuxda maamulku ugu soo wada guuro magaalada Dhuusamareeb.
Hadaba, maxay maamulka Galmudug wataan yaase shirka u matalaya danaha iyo rabitaanka shacabka 2dii maamul ee horay iskugu biiray ee Ximan iyo Xeeb iyo Galmudug? Dhabcan waxaa shirka u talaya madaxdooda oo kala ah madaxwayne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka. Madaxwayne ku xigeenka ayaa sidoo kale madaxwayne Farmaajo u raaci doona shirka London lagu qabanayo isagoo matalaya maamulka Galmudug.
Waxaa laga wada dheragsanyahay in 2da masuul ee Galmudug ee Xamar maantay looga yeeray si ay wadahadalka ugu matalaan Galmudug in ay labaduba yihiin garab taageersan fikirka Dowladda federalka iyo Ahlusunna oo isku waafaqsan in maamulka Galmudug dhismihiisa iyo wax walba koow laga soo bilaabo.
Haddii laba ogolaado in wax walba koow laga soo bilaabo lana bur buriyo maamulka la aqoonsanyahay ee Galmudug, waa in loo wada hadlaa sadexgeesood oo kala ah: Ximan iyo Xeeb, Galmudug iyo Ahlusunna. Madaxda hadda Xamar looga yeeray waa in ay ku biiraan garabka ay ka tirsanyihiin 3 dexdaas dhinac waayo suurto gal ma ahan in ay matalaan shacabka ay maamulkooda duminayaan.
Haddii Galmudug lagu kala tago waxaa xaqiiq ah in gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxwayne ku xigeenku aanay sii haysan doonin xilalka ay hadda ugu adeegayaan fikirka dadka doonaya in ay maamulka bur buriyaan.
Dhinaca kale, shacabka Ximan iyo Xeeb iyo EX-Galmudug waxaa la gudboon in ay ka digtoonaadaan khatarta ay maleegayaan xubno Xamar jooga ee dano gaar ah ka leh in sidan wax loo wada dhisto, DF iyo kuwa lagu adeeganayo ee sita magaca maamulka Galmudug.
Waxaan kaloo is xasuusinaynaa in aanay haboonayn in arimahan laga aamusnaado lana sugo go,aamada ka soo bixi kara shirka xamar ka furmaya. Waxaa taas ka haboon in aan hadaba wilaayada loo dhiiban kuwa aan gayn ee shirka loo diro wakiilo shacabka dhawri kara maamulkiisa isla markaasna si cadaalad ah ula soo heshiin kara kooxda Ahlusuna sheegata.